प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास कसरी बन्यो 'पार्टी कार्यालय' ?
भाषणमा सुशासन र मितव्ययिता शब्द हम्मेसी नछुटाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र अप्ठेरोमा परेपछि संसद विघटन गरी भाषण गर्न धनगढीसम्म पुगेका उनले यसअघि र पछि पार्टी बैठकहरू स्वास्थ्य समस्या, सुरक्षा चुनौती देखाउँदै बालुवाटारमै राख्दै आएका छन् । यति मात्र होइन, वंशको भेलादेखि दलका डिनर पार्टीसम्मका कार्यक्रम बालुवाटारमा गरिएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रियसभा आफूइतर नेताका गुट बैठकहरूको आँकडा सुनाउँदै ओलीले भनेका थिए, ‘कुनै नेताको घरमा नाै महिनामा २ सय ८० वटा बैठक बसेछन् ।’ तर, यसाे भन्ने ओलीले बालुवाटारमा गरेका पार्टी बैठक र भोजभतेरका फेहरिस्त पनि लामै छ । र, ती बैठकका खर्च नागरिकले कर तिरेकाे राज्यकाेषबाट हुन्छ ।
ओली अध्यक्ष रहेको नेकपाको सचिवालय बैठक प्रायः बालुवाटारमै बस्छ । त्यसअघि पनि सबैजसाे बैठक त्यहीँ हुने गर्थे । मंसिरकाे तेस्रो साता नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा राखिएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली गएनन् । कारण देखाइयो, स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षा चुनौती । पहिला पार्टी कार्यालयमा पनि बस्ने सचिवालय बैठक त्यसपछि बालुवाटारमै राख्न थालियो ।
अहिले नेकपा विभाजित छ । उनले नेतृत्व गरेको समूहका अधिकांश बैठक बालुवाटारमै राखिन्छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बैठकसमेत बालुवाटारमै राखिएको थियो । भेटघाट, भोजभतेरदेखि रमझमका कार्यक्रम बालुवाटारमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवासलाई पार्टी कार्यालय वा निजी सम्पत्ति जसरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसको अर्को प्रमाण हो, २८ भदौ २०७६ मा ओली वंशको साधारणसभा, जुन बालुवाटारमै गरिएको थियो । कार्यक्रम झण्डै ४ घण्टासम्म चलेको थियो । ओली वंश अक्षय कोषद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, उनकी पत्नी राधिका शाक्य र बुबा मोहनप्रसाद ओलीलाई अभिनन्दन गरिएको थियो । कार्यक्रम सकिएपछि बालुवाटारमा ओलीका वंशहरू छमछमी नाचेका थिए ।
लेखक एवं विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले यस सन्दर्भमा ट्वीटरमा कडा टिप्पणी गरेका थिए, ‘ओली बन्धुहरूको भेला, भोज, मोज पनि बालुवाटार दरबारमा ? अब ओली बन्धुहरूको व्रतबन्ध, विवाह र वनभोजदेखि द्यूतक्रीडा पनि त बालुवाटारमै हुने होला । ठीकै हो, भेला ओली सरका बन्धुहरूको, रैरकम राज्यकोषको । भन्छन् नि– लुटको धन, फुपूको श्राद्ध । घरिघरि प्रम बन्न पाइन्न, मौकामा खाने हो !’
प्रेस संगठनको राष्ट्रिय भेला
१२ पुस, २०७६ मा नेकपानिकट पत्रकारहरूको छाता संस्था प्रेस संगठनको राष्ट्रिय भेला पनि बालुवाटारमै गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै भेला बालुवाटारमा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यसलाई ‘सामान्य चियापान’ भनेका थिए, जहाँ तीन सयभन्दा बढी पत्रकार सहभागी थिए ।
बालुवाटारमा प्रेस संगठनको राष्ट्रिय भेला हुन लागेको विषयमा प्रेस संगठनका एसोसिएट इन्चार्ज सइन्द्र राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
‘प्रस्ट भाषामा- बालुवाटार कुनै सम्मेलनस्थल होइन, त्यो प्रशासकीय प्रमुखको सरकारी निवास हो’, राईले लेखेका थिए, ‘संस्था/संगठनलाई बचाउन, गति दिन र उचाइ लिन प्वाँख बन्नुपर्नेहरू किर्ना बन्ने बाटोमा लागे भने चाहेरै पनि परिणाम आशानुरूप आउँदैन । लोकतन्त्र (जनवाद) सँग जाेडिने बालुवाटार कमजोर पार्ने भनेकै यस्ता किर्ना प्रवृत्तिले हो । त्यसैले वंशको होस् अथवा कुनै नामको सम्मेलन, कम्तीमा त्यहाँ नगर्दा उचित होला । बालुवाटारको भोजमा मात्रै होइन, कुल्चिने माटो पनि खाडीको बगरमा बगेको पसिनाको सुगन्ध हो ।’
१७ चैत, २०७४ मा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कलाकारहरूलाई पार्टी दिए । अघिल्लो दिन ‘दोस्रो फान अवार्ड’ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी ओलीले भोलिपल्टै त्यस्तो पार्टी बालुवाटारमा आयोजना गरेका थिए । ओलीले अनावश्यक काम गरेको भन्दै यो कार्यको त्यतिबेला धेरैले आलोचना गरेका थिए ।
पार्टी एकताको पार्टी
३ जेठ, २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको दिन साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘डिनर पार्टी’ राखेका थिए, जहाँ एक हजारभन्दा बढी नेताकार्यकर्ता सहभागी थिए । पार्टी एकतापछि पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि ओलीले बालुवाटारमै राखे ।
संयाेग पनि के भइदियाे भने, बालुवाटारमा जन्मिएको नेकपा बालुवाटारमै दुई चिरा भयाे । ७ पुसको ओलीपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक नेकपा विभाजनको स्पष्ट चित्र थियो ।
त्यस दिन ओलीले आफूनिकट केन्द्रीय कमिटी बैठक बालुवाटारमै राखे, त्यहीँ शपथ गराए, जहाँ पाँच सयभन्दा बढी नेताकार्यकर्ता जमघट भएका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली गुट भेलाहरू प्राय बालुवाटारमै राख्छन् ।
ओली मात्र होइनन्
यसरी बालुवाटारको दुरुपयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइनन् । विगतका प्रधानमन्त्रीले पनि बालुवाटारको सरकारी निवासमा पार्टीका कार्यक्रमहरू राखेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १४ पुस, २०७४ मा बालुवाटारमै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक राखेका थिए । कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति एवं प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले पार्टीका बैठक प्रायः बालुवाटारमै राख्थे ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री भएका बेला पार्टीका अधिकांश कार्यक्रम बालुवाटारमै गरे । त्यसबाहेक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सिनेटदेखि भेटघाट र भोजभतेरसम्म बालुवाटारमा भएको थियो ।
तर, ओलीले विगतका प्रधानमन्त्रीलाई बिर्साउने गरी सरकारी निवासको दुरुपयोग गरिरहेको प्रति आलोचना हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा बालुवाटारमा पार्टीका कार्यक्रम राख्न हुँदैन भन्ने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका नेताहरू अहिले चुपचाप छन् । यसबारे प्रश्न सोध्दा उनीहरू बोल्न मान्दैनन् ।
सुरुवात काेबाट भयाे ?
‘सरकारी निवासको यस खालको दुरुपयोग कहिलेदेखि कसले सुरु गर्‍यो ?’
पूर्वसचिव शारदा त्रिताल २०६२/०६३ सालपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बालुवाटारमा पार्टीका छिटफुट बैठकहरू राख्न थालेको र त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको दुरुपयोग सुरु भएको बताउँछन् । ‘गिरिजा बिरामी हुनुहुन्थ्यो । बाहिर जान गाह्रो हुने भएकाले उहाँले त्यसै बेलादेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि प्रधानमन्त्री निवासमा राख्न थाल्नुभयो । पार्टीका बैठक पनि राख्नुहुन्थ्यो’, त्रिताल भन्छन् ।
उनका अनुसार त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले भने सरकारी निवासको बढ्ता दुरुपयोग गर्न थाले । ‘अपवादबाहेक गिरिजापछि प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले बालुवाटारको सरकारी निवासलाई निजी सम्पत्तिजसरी प्रयोग गर्दै आए’, उनी भन्छन् ।
सुशासन र मितव्ययिताका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट झनै चर्को रूपले बालुवाटारको दुरुपयोग भएको उनी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको दाबी छ, ‘बालुवाटारमा हुने सबै कार्यक्रमको खर्च राज्यकोषबाट हुँदैन । जसले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो, उसैले खर्च गर्नुपर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवका रूपमा काम गरिसकेका एक पूर्वप्रशासकका अनुसार बालुवाटारमा हुने अधिकांश कार्यक्रममा राज्यकोषकै रकम खर्च हुन्छ । किनकि ‘प्रधानमन्त्री निवासको बैठक खर्च’ शीर्षकमा एकमुस्ट बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आउँछ । ‘जसले जे दाबी गरे पनि बालुवाटारमा हुने कार्यक्रम खर्चको एकमुस्ट बिल प्रधानमन्त्री निवासको बैठक खर्च शीर्षकमा आउँछ, त्यसैले त्यो खर्च राज्यकै हो’, उनले शिलापत्रसँग भने ।
दुई वर्षअघि पूर्वसचिव त्रितालले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित होइन भन्ने कुरा कहिलेदेखि अनुभूति हुने होला !’
उनको यो स्टाटसलाई अर्का पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले ट्वीट गरे । उनको ट्वीटमा कमेन्ट राख्दै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले लेखे, ‘खादा खाएको बिल कार्यालयमा आउँछ ।’ अर्थात्, कार्यक्रम जसले गरे पनि खर्च सरकारी नै हो ।
पूर्वप्रशासकहरू यस्ता कार्यक्रममा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्नु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘आर्थिक समृद्धि र मितव्ययिताको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवासमा पारिवारिकदेखि पार्टीका हरेक कार्यक्रम गर्नु नै अनुचित हो’, पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘त्यसको खर्च राज्यको ढुकुटीबाट हुनु झन् बिडम्बनापूर्ण छ ।’
बालुवाटारमा कस्ता कार्यक्रम ?
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा चुनौती हुँदा वा अस्वस्थ हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारमा बस्नुलाई सामान्य रूपमै लिन सकिने भए पनि पार्टीका बैठक, गुट, भ्रातृ संस्था, वंशका भेला र डिनर पार्टीहरू राखिनु भ्रष्टाचार नै भएको सुशासनका जानकारहरू बताउँछन् ।
इमरान खानबाट सिक्ने कि !
खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरैले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानबाट मितव्ययिताको पाठ सिक्न सुझाएका छन् । सरकारी निवास दुरुपयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालका धेरै प्रयोगकर्ताले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको उदाहरण दिएका छन् ।
खानले प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार प्रमुखको सुविधा कटौती गरेर आलिसान महलमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तीनकोठे सैनिक सचिवालयमा सारेका थिए । र, त्यहाँ उनले क्याम्पस सञ्चालन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि व्यवस्था गरिएको हेलिकाेप्टर, ३३ बुलेटप्रुफ कारसहित ८० वटा गाडी लिलामीमा राखेका थिए । उनले जम्मा दुइटा गाडी मात्रै आफ्नो सचिवालयमा राखे भने आफ्नो निवासमा कार्यरत पाँच सय २४ कर्मचारी कटौती गरी दुई जनालाई मात्रै निरन्तरता दिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले पाउने चिया र खाजा खर्च पनि कटौती गरे । आफूसहित सरकारी कर्मचारीको तलब र विदेश भ्रमण खर्च पनि कटौती गरे ।
‘हामीकहाँ त कार्यकर्ता बटुलेर बालुवाटारमा पार्टी भइरहेको छ’, त्रिताल भन्छन् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को परिच्छेद ५ मा पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाहमा स्पष्ट भनिएको छ, सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्ययी ढंगबाट अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने । ‘तर, बालुवाटारमा हुने गुटका भेला, पुस्तक विमोचन, भोजभतेर उत्पादनशील छन् ?’ धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘के सुशासन र समाजवादको बाटो यही हो त ?’
पूर्वसचिव त्रिताल सम्झन्छन्, ‘उबेला प्रधानमन्त्री गरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकारलाई हामीले आग्रह गरेका थियौँ, सरकारीबाहेकका काम (पार्टी बैठक, अनावश्यक कार्यक्रम) नगरिदिनुहोस्, जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । तर, उहाँहरूले मान्नुभएन र आज निजी सम्पत्तिको तहमा यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’
बालुवाटार मात्र होइन, सरकारको जुनै पनि सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न पदाधिकारी आफैँ नैतिक र आमनागरिक जागरुक हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘बालुवाटारमा पार्टी बैठक बोलाए भने नेताहरू नजाने, पार्टी कार्यालयमा बोलाउनोस् भन्ने । नेताले यसो गरेनन् भने जनताले यस्ता बैठक भइरहेका बेला बालुवाटार अगाडि गएर प्रदर्शन गर्ने, यस्तो कार्यको विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने मात्र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिएला, नभए यो प्रवृत्ति रोकिनेवाला छैन । बरु यसको सिको गर्दै अरुले पनि सरकारी सम्पत्तिमाथि राइँदाइँ गर्न थाल्छन्’, त्रिताल भन्छन् ।
लेखक तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवासलाई निजी सम्पत्तिजसरी प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् ।
उनी प्रश्न गर्छन्, ‘बिरामी भएर बैठकहरू बालुवाटारमा राखेको बताउने अनि भाषण गर्नचाहिँ काठमाडौं उपत्यकाभरि घुम्दै धनगढीसम्म पुग्ने ? प्रधानमन्त्रीले जस्तै अरु मन्त्री र सचिवहरूले पनि सरकारी क्वाटरमै बैठक राख्न थाले भने देशको हालत के हुन्छ ?’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७, ०७:३७:००